यी महिलाको आँखाबाट निकालियो १४ वटा कीरा
काठमाडौं, २ फागुन — अमेरिकाको ओरेगनमा एक महिलाको आँखाबाट १४ वटा कीरा निकालिएको छ । चिकित्सकहरूलाई यो अनौठो घटना हो किनकि यस्तो कीरा जनावरमा मात्र पाइन्थ्यो ।
सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका वैज्ञानिकहरूका अनुसार, थेलाजिया गुलोसा प्रजातिको परजीवी कीराका कारण मनुष्यमा भएको संक्रमणको यो पहिलो घटना हो ।
एबी बेकले नामक महिलालाई अगस्ट २०१६ मा देब्रे आँखामा पोलेको जस्तो लाग्यो । उनले आँखामा परेला प–यो होला भन्ठानेकी थिइन् तर सात दिनपछि उनको आँखाबाट कीरा निस्क्यो । यसको जाँच गर्दा यो कीरा थेलाजिया गुलासो प्रजातिको भएको पाइयो ।
त्यसको २० दिनमा बेकलेको आँखामा यस्तैखालका अन्य कीरा पनि पाइए । आधा इन्च लामो यो परजीवी कीराले आँखाको पुतलीनजिकको चिप्लो पदार्थबाट पोषण प्राप्त गर्छ ।
थेलाजियाबाट कुकुर, बिरालो र स्याल जस्ता जन्तु संक्रमित हुन्छन् । कीराको संक्रमण फैलाउनमा झिंगाहरूको ठूलो हात हुन्छ ।
विश्वका सबैभन्दा अनौठा ८ शहरहरु, के हुन् कारण ?
भारतसँग सीमा जोडिएको सोमेश्वरगढीमा विप्लव माओवादीले लगायो काँडेतार चितवन–भारतसँग सीमा जोडिएको चितवन माडीको सोमेश्वरगढी सीमा क्षेत्रमा विप्लव माओवादीले मंगलबार काँडेतार लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा फ्याक्सन इन्चार्ज कृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा गएक...
बेलायती रोजगार दरमा उच्च गिरावट
मलेसिया जाने कामदार ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतको सफाइ
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार तल्लीन, दशकयताकै बाक्लो हिमपात
सुमार्गीको विवादित रकम फर्काउन राष्ट्र बैंकको आलटाल
सुन कसरी तामा भयो ? प्रहरी प्रधान कार्यालयले थाल्यो छानबिन